अभिभावक भएर यस्तो गल्ती त गर्नुभएको छैन नि ? | सुदुरपश्चिम खबर
अभिभावकहरू यो सांसारिक सुख दिने चिजहरू मात्र आफ्ना सन्तानलाई दिएको छु भन्ने पत्ता लगाउन असफल रहेको देखिन्छ । यस्ता कुराले बालबच्चामा झन् समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले आफ्ना सन्तानलाई सही शिक्षा दिन सकेको छ कि छैन भनेर अभिभावकले आत्मनिरीक्षण गर्ने बेला भएको छ । आफ्नो सन्तानको राम्रो गुणलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरूलाई खुसी र सुखी जीवन बाच्न सहयोग गर्नु आमा–बुबाको मुख्य कर्तव्य पनि हो ।
यस्ता अभिभावक‚ जसको दिमाग सधैँ विगतमा जकडिएको हुन्छ‚ उसले कहिल्यै आफ्नो सन्तानसँग राम्रोसँग सञ्चार गर्न सक्दैन । बच्चाहरूले भने सजिलै आफ्नो विगत बिर्सिएर वर्तमानमा बाच्ने गर्छन्‚ त्यसैले उनीहरू सधैँ खुसी हुने गर्छन् । हामी सधैँ विगतमा भएका घटनाहरूलाई समेटेर त्यसले पु¥याउने बाधाहरूलाई र नमिठो अनुभवलाई बोकेर हिँड्ने गर्छौँ । त्यसैले जतिबेला हाम्रा बच्चाहरू हामीसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्छन्, त्यतिबेला हामी उनीहरूको कुरा सुन्ने र बुझ्ने अवस्थामा हुँदैनौँ । यसले हामीलाई असल अभिभावक बन्न दिँदैन ।
हामीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दा यसले हाम्रो दिमागमा रहेको तनाव घटाउने काम गर्छ । यसले बच्चाको दिमागमा अभिभावकका लागि सम्मानको विकास गराउँछ । यसो गर्नाले उनीहरू पनि आमा–बुबाको सिको गर्न थाल्छन् । इमानदारीपूर्वक आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न सक्ने हुन्छन् । जब हामी आफ्नो गल्ती लुकाउँछौँ‚ हामी तनावपूर्ण स्थितिमा पुगिहाल्छौँ । अभिभावकको गल्तीलाई यस्तो अवस्थामा बच्चाहरूले समेत अनुभूति गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले गल्ती स्वीकार गर्न नसक्दा उनीहरूलाई लाग्छ‚ मेरो आमा–बुबा त आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने म किन गर्ने ? यसले अभिभावक र सन्तानको बिचमा सूक्ष्म दरारको विकास गराउँछ । त्यसैले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु अभिभावकका लागि अनिवार्यजस्तै हुन जान्छ ।
यदि अभिभावकले लगातार र एकोहोरो रूपमा सन्तानको गल्तीलाई मात्र खोज्ने काम ग¥यो भने अभिभावक आफैँ तनावमा पुग्छन् । त्यसको ठिक विपरीत उनीहरूको राम्रो गुण र ज्ञानहरू खोज्ने काम अभिभावकले नगरेको पाइन्छ । परिणाम स्वरूप बच्चाहरू आफूमा भएको दोषमा मात्र ध्यान दिने हुन्छन् । त्यसो गर्नुले बच्चालाई दुखी बनाउँछ । यदि अभिभावकले बच्चाको दोषमात्र नभई उनीहरूको गुणहरूबारे सोचेमा अभिभावक र बच्चाहरूलाई खुसी हुन मद्दत पुग्छ ।
बच्चाहरूलाई अभिभावकले उच्च अपेक्षा राखेर उनीहरूसँग कुराकानी गरेको पटक्कै मन पर्दैन । बच्चाहरूमा अहङ्कार कम हुने भएकाले उनीहरू उच्च अपेक्षा राखेको सजिलैसँग बुझ्छन् । त्यसैले हरेक अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई कुनै अपेक्षा नराखी हुर्काउने र संरक्षण गर्ने गर्नुपर्छ । केही अपेक्षा नराखी प्रेम गर्न सम्भव हुन्छ । मेरो सन्तानले मलाई बुढेसकालमा पाल्छ, हेरचाह गर्छ, समाजमा स्थापित आफ्नो प्रतिष्ठालाई जोगाउँछ भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन । भोलि जे भएपनि सामना गर्छु‚ तर आज राम्रोसँग बच्चा हुर्काउँछु भन्दै असल अभिभावकत्व दिन सफल हुनुपर्दछ । मकालु खबर बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * 59 + = 69